Somalia:UK probes reports of 50 girls taken to Somalia for FGM | Midnimo Online | Somalia News and Media
Home Diaspora Somalia:UK probes reports of 50 girls taken to Somalia for FGM
Somalia:UK probes reports of 50 girls taken to Somalia for FGM
50 girls” were taken from the European country to Somalia for female genital mutilation (FGM)
The United Kingdom says its Scotland Yard has begun an inquiry into reports that – at least “50 girls” were taken from the European country to Somalia for female genital mutilation (FGM).The inquiry confirmed here on Friday ensues after a top UK politician; Lady Tonge contacted the London Metropolitan Police after spotting a large group of girls on a flight from Heathrow airport last weekend Midnimo.com reported on Friday 17 July,2015.
The girls, aged 11 to 17 were with their mothers and grandmothers, it emerged.
The police force says it secured the court order on the day new legislation came into effect.
The move prevents the girls being taken to Africa, it said.
The civil legislation allows officials to seize passports from people they suspect are planning on taking girls overseas for FGM.
FGM, also termed female circumcision, refers to any procedure that alters or injures the female genital organs for non-medical reasons.
Bedfordshire Police said it is estimated that more than 20,000 girls under the age of 15 in the UK are at risk of FGM each year; although very few cases are reported.
Waalidiinta Soomaalida waa dhibanayaal. July 19, 2015 at 2:36 am
DOWLADDA ingiriiska waa dowladd aan wax badan kala socon dhaqanka dadka Muslimiinta ah ee dalkeeda ku nool. Haddii wax la joojinayo qaabkaan looma joojiyo ee qaab sharciga Islaamka waafaqsan Dadkuna ay ku qanacsan yihiin iney u abaarto ayay ahayd. Mida kale beenta waa shey xaaram ah. DOWLADDA INGIRIISKANA QAABKASTA OO AY ISLEEDAHAY WAX WAA KU JOOJIN KARTAA BEEN BADAN BA HA LA SHEEGEE WEY Martaa haddiiba ay u aragto in wax isbedel ah ay ku imaanayaan.
Dowladda ingiriiska haddii uu sharcigeeda si sax ah u shaqeynaayo waxa ay ahayd arintaani waama mid wacyi gelin bulsho u baahan. Bal ka waran mida ay iyada gacanteeda ku abuurtey dadkuna aysan ogeyn iney yuhiin Dhibanayaal. marka loo eego dhibaatooyinka baahsan ee ka jiro Gudaha UK. Kuwa aan hoos ku soo sheegay waa faro ku tiris.
1. Waxaa kamid ah dhibaatooyinka baahsan ee cisbitaaladdda UK yaalo. Waxaana kamid ah dhanka dhalmadda. DUMARKA soomaalida ah iyo kuwa ajnabiga ahba waxaa dhib weyn uu ka heystaa dhalmaddda. Hal ama labo cunug markii ay dhasho. Waxa lagu qasbaa dumarka in marka 3-xaad la marsiiyo waQaliin ADAG sicerianka ee ah. Waa qaliin qad u dhib badan oo dhaawacaya ama xanuun badan u geysanayo qofka dumarka ah ee dhalaya. HADAFKA UGU WEYN AMA SIYAASADDA QARSOON EE KU JIRTO WAA :-
A. In lagu xakameeyo dhalmadda dadka ajnabiga ah oo ay soomaalidda ku jiraan. Taasi oo ay dowladda ingiriiska u aragtey inay tahay xalka ugu fudud ee Hooyadda lagu nacsiin karo dhalmadda badan. ( Deeq illahay baa baxsho ee Soomaalida ee waa dantooda gartaan ).
B. Dhanka talalka loo yaqaano MRS oo ah mid siyasada ka dambeeyo isticnaalkisu yahay lagula daqaalamo caruurta dadka afrikacnka,asianka iyo carabaha ku dhaqan dalka Uk,US,Canada, sweden iwm Talalkaani lama siiyo dadka cad cad ama asalkoodu yahay homogenouska white ka. Talakaani waa aalad loo sameystay dabar goynta dadka muhaajiriinta ah ee u nolol raadsaday dalal badan oo reer gal beed ah oo ay ku jiraan US,SWEDEN UK AND CANADA. cunuga waxa uu ku dhalanayaa waa disabale nimo ama qof aan Buuxin. Taasi cawaaqob xumadda ka dhalan karta ama xanuunka ay ku lahaan karto waalidka waa mid aan Waalidka weligiisa ka goeyn. Caruur inta cimriga waalidka ka dhiman aan caqligoodu,cilmigooda iyo waxqabadkooduba saaran yahay waalidka dhalay caruurto. Waxkastana waalidka ayay ka sugayaan. Waa labo qof kafaalo qaad noloshaada inta ka dhiman iyadoo la og yahay in waalidiinta ajnabiga ah intooda badan ay Nolosha ku adag tahay… Dhibaatadda ka dhalato talaaladda qaar waa xanuun badan ku reebo awlaada dadka ajnabiga ah oo ku noool dalalka reer galbeedka.
3. Waxaa kalo jiro ciqaaboiyin ka duwan kuwa kore kaasi oo ay la kulmaan shacabka ajnabiga oo ay ku jiraan Soomaalida. Dhibkaani waxa uu ka heystaa waa cisbitaaladda.
Cuniga markii uu dhasho kadib waxaa la dhahaya waalidka wiilka/ganadha awoodeeda waa daciif oo dhiiga cas baa ku yar. Kadibna waxaa cunugaasi lagu diraya cirbad kamid ah kuwo talaka. Looma sharixn saameynta ay ku yeelaneyso cunuga mustaqbalkiiisa cfimaad iyo mid Nashaad ba. Cirbadd waa mid la oghayay ama dhaqtarka uu ogyahay in cunugaani dhibka ay dhaliso ciqaabteeda uu ay marayaan labaduba waa waalidka & cunuga.
Cawaaqib xumada ka dhalata arintaani waa mid iyadana ku reebta waalidka xanuun ay adag tahay in waalidka cunugaasi ka soo kabto. Markii lagu duro cirbadda so celsio difaaca sida ay sheegeen. Durbadiiba waxa ay waxyeelo gaarsiineysaa dhanka sambabada. Kadibna waxa adkanaya in la in cuniga wixii uu afka ka qaadan jirey ay istaagan. Kadibna dhibka uu meeshaasi ka sii bilowdo in waalidka waqti aad u tiro badan looga qaado balamo kala duwan ee uu cisbotaalka u sameeyo waalidka. Taasi waxay waalidka cunuga dhalay gelisaa xaalad aan wanagsaneyn.cunuga waxa lagu sheegaya inuu tiibisho qabo. Waxana u sabab ah waa cirbadda lagu durey oo ka awood badneyd dogaaca jirka ee cunuga.
DHIBAATOOYINKA KALA DUWAN EE AAN LA SOO KOOBI KARIN EE YAALA CISBITAALADDA UK. Haddiiba dowladda ingiirksa ay ku jirto Naxariis Bemi aadaninimo. Taasi ayay ahayd in dowladda ingiriiska XALWAARA u hesho. Taasina waxay ku imaankartaa in wax ka bedeaho mowqifkeeda ama aragtida aan wanagsan oo ay ka Qaaday Dowladda ingiriiska dadka muhaajiriinta ah ee ku nool UK.
DADKA SOOMAALIDA AH EE KU DHAQAN UK WAXAY U BAAHAN YUHIIN INEY LA XISAABTAMAAN, HELAAN LOYARO U DOODI KARA XUQUUQDOODA HADDII AY DAREEMAN IN XAD GUDUB LAGU SAMEYEY.
c xakiim July 19, 2015 at 1:35 am
DOWLADDA ingiriiska waa dowladd aan wax badan kala socon dhaqanka dadka Muslimiinta ah ee dalkeeda ku nool. Haddii wax la joojinayo qaabkaan looma joojiyo ee qaab sharciga islaamka waafaqsan dadkuna ay qanacsan yihiin iney u abaarto ayay ahayd. Mida kale beenta waa shey xaaram ah. DOWLADDA INGIRIISKANA QAABKASTA OO AY ISLEEDAHAY WAX WAA KU JOOJIN KARTAA BEEN BADAN BA HA LA SHEEGEE WEY Martaa haddiiba ay i aragto in wax isbedel ah ay ku imaanayaan.
Dowladda ingiriiska haddii uu sharcigeeda si sax ah u shaqeynaayo waxa ay ahayd arintaani waama mid yaar marka loo eego dhibaatooyinka baahsan ee ka jiro Gudaha UK.
1. Waxaa kamid ah dhibaatooyinka bahsan ee cisbitaaladdda yaalo. Waxaana kamid ah dhanka dhalmadda. DUMARKA soomaalida ah iyo kuwa ajnabiga ahba waxaa dhib weyn uu ka heystaa dhalmaddda. Hal ama labo cunug markii ay dhasho. Waxa lagu qasbaa dumarka in marka 3-xaad la marsiiyo waxaQaliinka sicerianka ee ah. Waa qaliin qad u dhib badan oo dhaawacaya ama xanuun badan u geysanayo qofka dumarka ah ee dhalaya. HADAFKA UGU WEYN AMA SIYAASADDA QARSOON EE KU JIRTO WAA :-
B. Dhanka talalka loo yaqaano MRS oo ah mid siasana lagula daqaalamo caruurta dadka afrikacnka,asianka iyo carabaha ku dhaqan dalka ingiriiska. Talalkaani lama siiyo dadka cad cad ama asalkoodu yahay ingiriis. Talakaani waa aalad loo sameystay dabar goynta dadka muhaajiriinta ah ee u nolol raadsaday dalal badan oo reer gal beed ah oo ay ku jiraan US,SWEDEN UK AND CANADA. cunuga waxa uu ku dhalanayaa waa disabale nimo ama qof aan Buuxin. Taasi cawaaqob xumadda ka dhalan karta ama xanuunka ay ku lahaan karto waalidka waa mid aan Waalidka weligiisa ka goeyn. Caruur inta comrigaaga ka dhiman aan caqligoodu adigu tahay. Waxkastana ay kaa sugayaan. Waa labo qof kafaalo qaad noloahooda iyadoo la og yahay in dadka intooda badan ay tooda la ciireyso. Dhibaatadda ka dhalato talaaladda qaar waa xanuun badan ku reebo awlaada dhaleen caruuurta.
3. Waxaa kalo jiro ciqab dad ban oo lagu sameeyo walidka ama dadka ajnabiga ah. Waxaa kamid ah cunuga markii uu dhasho baa waxaa lagi dhahaya waalidka wiilka/ganadha awoodeeda waa daciif oo dhiiga cas baa ku yar. Kadibna waxaa cunugaasi lagu diraya cirbad talaalk ah oo ka tanweyn. Cawaaqib xumada ka dhalata arintaani waa mid iyadana ku reebta waalidka xanuun ay adag tahay in waalidka cunugaasi ka soo kabto. Markii lagu duro cirbadda so celsio difaaca sida ay sheegeen. Durbadiiba waxa ay waxyeelo gaarsiineysaa dhanka sambabada. Kadibna waxa adkanaya in la in cuniga wixii uu afka ka qaadan jirey ay istaagan. Kadibna dhibka uu meeshaasi ka sii bilowdo in waalidka waqti aad u tiro badan looga qaado balamo kala duwan ee uu cisbotaalka u sameeyo waalidka. Taasi waxay waalidka cunuga dhalay gelisaa xaalad aan wanagsaneyn.cunuga waxa lagu sheegaya inuu tiibisho qabo. Waxana u sabab ah waa cirbadda lagu durey oo ka awood badneyd dogaaca jirka ee cunuga.
Leave a Reply to Waalidiinta Soomaalida waa dhibanayaal. Cancel reply